ညီမလေး …ချမ်းနေရှာမှာပေါ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ညီမလေး …ချမ်းနေရှာမှာပေါ့
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Oct 24, 2013 in My Dear Diary, Short Story | 32 comments
ဆောင်းခိုးမှုန်တွေက ရပ်ရှစ်မျက်နှာ လွှမ်းထားသည်မှာ အရာရာ မှိုင်းမှုန်မှုန်နဲ့ လွမ်းစရာ။
ဘယ်ဆီလွမ်းရမှန်း သေချာမသိ။ သိုပေမယ့် ရင်ထဲမှာ တော့ လွမ်းရိပ်ရိပ်ပင် ။
ပွဲဈေးတန်းတစ်လျှောက်လဲ မှိန်ပျပျ..အလင်းပွင့်လေးတွေနဲ့ အသက်ဝင်နေသည်။ ပွဲဈေးလာသူ ပွဲကြည့်ချင်သူ
ဈေးရောင်းသူ…အရွယ်စုံ သွားလာနေကြသည်မှာ ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ မှ မတူသော မြန်မာဓလေ့ မြင်ကွင်းလေးပင်။
ပွဲလာသူတွေကလည်းပုံစံ အမျိုးမျိုး။ ဆောင်းပွဲခင်းမို့အနွေးထည်ရောင်စုံလေးတွေနဲ့ ..ဆောင်းအလှကို အားဖြည့်ထားသည်။ တချို့ ကလည်း အသက်ကြီးကြီးမို့ ဆေးလိပ်ဆေးတံခဲထားရင်း ခြုံစောင်ကြီးတွေ လွှမ်းခြုံထားရင်း အာပေါင် အာရင်းသန်သန် ပြောကြ …အော်ကြ..နုတ်ဆက်ကြနဲ့ ။
တခါတခါ ဆောင်းရာသီနဲ့ ဘယ်လိုမှ ရစ်သမ်မကိုက်သော မြင်ကွင်းလည်းတွေ့ ရသည်…။
အင်မတန်ချမ်းနေသော အချိန်မှာတောင် ဖာလူဒါ အအေးသောက်နေသော မိသားစုများ..လူငယ်ကောင်လေး ကောင်မလေးများကိုတွေ့ ဘူးသည်။
တောတောင်ထဲမှာဘဲ တောင်သူလုပ် တောင်ယာလုပ်သော သူများဖြစ်သည့် သူတို့ တစ်တွေ ပိုက်ဆံရှိပေမယ့် မြို့ ဆိုင်များမှာသာ ရနိုင်သော အအေးမျိုးစုံနဲ့နာမည်ကျော် ဖာလူဒါ ဆိုတာမျိုးကို
ဘုရားပွဲတော်များနှင့် နာမည်ကျော် ပွဲများမှာသာ မြို့ က လာရောင်းချသော ဆိုင်များမှာ သောက်ဘို့အခွင့်အရေးပင်..။
တစ်ခြားစားပွဲမှာ မှောင်ရိပ်ခိုရင်း ဦးထုပ်အ၀ိုင်းကြီး ခပ်ငိုက်ငိုက် ဆောင်းလျှက် လ္ဘက်ရည် သောက်နေသော ကျနော့်အဘို့ပထမဆုံးအကြိမ် မြင်ကာစမှာ အထူးအဆန်းဖြစ်ခဲ့သည်..။
ကိုယ့်အဘို့သိချင်စိတ် သိပ်ပြင်းပျလို့ တစ်ခါက မေးခဲ့ဘူးတာလေးကို တွေးရင်းပြုံးမိသည်။
“ ဒီလောက်အေးနေတာကို ဖာလူဒါ သောက်တော့ ပိုပြီး မချမ်းဘူးလား”
“ ဖာလူဒွာ က တစ်နှစ်မှ တစ်ခါ နှစ်ခါလေး သောက်ရတာ.. ဆောင်းတွင်း မသောက်ကောင်းဘူးလား..
ချမ်းတော့လဲ စောင်ခြုံပြီး သောက်မှာ..နောက်ဆို သောက်ရမှာမဟုတ်ဘူး ဦး ရဲ့ ” ဟု ဖြေတော့
ကိုယ့်မှာ မပြုံးနိုင်…“ အော်…ဘ၀ တွေ ဘ၀တွေ”လို့ သာ တိုးတိုးလေး ညဉ်းခဲ့ရသည်။
ဆောင်းတွင်း ချမ်းလျှက်ပင် မသောက်ဘူးသော အရာကို မေးချင်းရိုက်ပြီး သောက်နေသူတို့ ကိုသာ
တစ်ချို့ လည်း အနွေးထည်လှလှလေးတွေ ၀တ်ထားသည်။ တစ်ချို့ တော့လည်း စောင်ခြုံကြသည်။
တစ်ချို့ဘာမှ မရှိလို့ဝတ်ထား ခြုံထားခြင်းမရှိသော လူတွေလည်း တွေ့ ရသည်.။
အဆိုးဆုံးက ချမ်းလျှက် ၀တ်စရာကလည်း အနွေးထည်မရှိ..ပွဲကလည်း ကြည့်ချင်သောကြောင့် ရောက်လာတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေကို နှုတ်ခမ်းပြာပြာလေးတွေနှင့် တွေ့ တဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ မကောင်း။
ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကလေးလူကြီး ချမ်းတဲ့ရာသီမှာ အနွေးထည်လေး တစ်ထည်စီတော့ ရှိစေချင်မိသည်။
သူတို့ တစ်တွေ မချမ်းတတ်လို့ တော့ ဟုတ်ဟန်မတူ။
မရှိလွန်းလို့ သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။…………………………………………………..
ဒါဖြင့် လူတိုင်းမှာ အနွေးထည်ရှိလားဆိုတော့…..မရှိတတ်ကြပါ။ ချမ်းနေသော ကလေးများကိုကြည့်ရင်း
တစ်ခါက တွေ့ ဘူးသော ကောင်မလေးကို သတိယမိသည်။
တစ်ခါတုန်းက အဖြစ်လေးပါ…ကြာတော့ကြာခဲ့ ပါပြီ…။ …………..
မော်လမြိုင်ဇာတ်တွေ တော်တော်များများက ရေးမြို့ နယ်ကို အားထားပြီး ကကြတာ များပါတယ်…။
ကျနော်တို့ လည်းရေးခွင်တွေကို ပိုပြီးကရပါတယ်…။ ဇာတ်မင်းသားဆိုတာ ပရိတ်သတ် မိတ်ဆွေ ပိုများပါတယ်..။
များတာမှ လူစုံ၊ ၁၂ရာသီ ပွဲဈေးရောင်းသူပါတယ်၊ လောင်းကစားသမားမျိုးစုံပါတယ်..။ကျနော့်ကို ခင်လည်းခင်ကြတယ်…။
သူတို့ အဖြစ်တွေကို သိနေတော့ ကူညီမိတာပါဘဲ…။ ဒီလိုလေ…တစ်ချို့ က ဒိုင်ကိုင်ကြတာများပါတယ်…၊သူတို့ က နည်းမျိုးစုံနဲ့ လိမ်တာပါဘဲ…။
တခါတခါ ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်၊ ဂျင်ပေါ်ကထုံးတွေနဲ့ တွေ့ ရင် သူတို့ ပျာပြီ…ငွေရင်းပြုတ်တဲ့ အပြင်..ကစားတဲ့ အခင်းစ
( အောက်ခံ ပုံတွေနဲ့ အခင်း…ကျနော်မခေါ်တတ်ဘူး) ပါပေးလိုက်ရတာ၊ ထိုးသားက သိမ်းသွားတာ ခံကြရပါတယ်…။
ဒါသူတို့ ထိတာပါဘဲ..။ ဒါဆို နောက်ရက် အခင်းစ အဖြူ သို့ မဟုတ် အပြာစလေးကိုင်ပြီး…ကျနော်အိပ်နေရင် မနိုးမချင်း
ခြေရင်းမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေတာ…နိုးလာမှ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့အကိုရယ် အရုပ်လေးဆွဲပေးပါဦး…ညက ညီလေးထိသွားလို့ 
ဘ၀တွေ ပျက်နေပါပြီ…ဘာ ညာ နတ်သံလေးနှောပြီး ကြက်တွေ ဖားတွေ ၀က်တွေ ဆွဲခိုင်းတော့တာပါဘဲ….။
ကိုယ်ကလဲ အဲဒီအချိန်ဆို အပေါ်ကနေ ဖိဟောက်ပြီး တရားဟောရတာပေါ့…အေး မင်းတို့ သမလိုက်လို့ ခွက်ချွတ် လက်ချွတ် ဖြစ်သွားလို့ မျက်ရည်ကျနေတဲ့မိသားစု တွေကို ကိုယ်ချင်းမစာဘူးလား….ဘာလားပေါ့…အဲလိုပြောရင် ကိုယ့်ကိုတောင် ပြန်တရားဟောသေးတာ…..
“ ကိုမင်းသား…လောင်းကစားမှန်သမျှ လိမ်တာ..သူတို့ သိတယ်..အကို သိပ်မသိဘူး…လောင်းကစားလုပ်လို့ မချမ်းသာတာလဲ သူတို့ သိတယ်..ဒါပေမယ့် သူတို့ လုပ်တာဘဲ…သူတို့ မိုက်တာပါ…။ညီလေးတို့ က သမာအာဇီဝ ၀မ်းစာရှာနေတာပါ…အတင်းမခေါ်ဘူးနော် ကိုမင်းသား…အကိုသိလား”…။
အဲဒီအခါကျ ကိုယ့်မှာ ဘယ်သူ့ ကို စိတ်တိုရမှန်းမသိပါဘူး…။
လောလောဆယ်တော့ သူ့ အခက်အခဲလေးကိုကူညီ လိုက်တာပါဘဲ…။ လာပြီးခိုင်းတတ်ကြလွန်းလို့ ကိုယ်ကလဲ သင်္ဘောဆေးတွေပါ အမြဲဝယ်ထားရတာ..။
“ အေး….လူဆိုတာ ချမ်းသာချင်တိုင်းမချမ်းသာပါဘူး…ကံ၊ဥာဏ်၊၀ီရိယ ၃ခုလုံးပြည့်မှ….အတိတ်ကံ အကျိုးပေးရင်တော့ ချမ်းသာပါလိမ့် မယ်…သူများကိုတော့ မလိမ်ပါနဲ့ ကွာ၊ လူမိုက်အားပေးလဲ ငါမလုပ်ချင်ဘူး”…..ဒီလိုပြောလို့ အကျွတ်တရားရသွားတယ် မထင်နဲ့ ဦး…
“ အကိုမင်းသား…ကစားဝိုင်းတခုမှာ ဒိုင်က ၁ယောက်ဘဲ နော်…အကူ နဲ့ အလံရှုးနဲ့ မှ ၃ယောက်….ကျနော်တို့ လူမိုက်ဆိုရင်…
ကစားဝိုင်းတခုမှာ ထိုးသားက ၂၀ကျော်တယ်…ဘယ်လူမိုက်က ပိုများလဲ…အကိုစဉ်းစားနော်”တဲ့ ။
“ ဟာ…ဒီကောင် ငါ့ကို စကားကပ်နေပြန်ပြီဆိုမှ…ကိုယ်တော်တွေက စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ထွက်ပြေးတာ..။
ဒီလူတွေ စကားပြောကတော့ ကျလောက်တယ် ..ဒါကြောင့်လဲ ကစားချင်သူတွေများတာ….
တစ်ချို့ များ ပုံဆွဲခိုင်းရင် ပြဇာတ်ကနေသလိုဘဲ…ဒိုင်တွေပစ်နေတာ…
“ အကိုမင်းသား…ပွဲကနေရင်း တခုခုဖြစ်ရင် ပြောနော်…ညီလေးအသက်ပါရင်းပစ်လိုက်မှာ” ဆိုတာက လာသေးတော့။
သူတို့ ကို ဆွဲပေးလို့ လဲ ကျနော်က ငွေကြေးတစ်ပြားမှ မယူပါဘူး…။ သူတို့ တွေကတော့ ဆေးလိပ်တွေ လ္ဘက်ရည်တွေ ၀ယ်ပို့ ပေးပေမယ့် သိပ်မျိုမကျပါဘူး….မလွှဲသာလွန်းမှသာ သောက်ပြရတာ..။
မျိုမကျတဲ့ အထဲမှာ တစ်ည ပြဇာတ်ကနေတုန်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရောက်လာတာ…လာမိတ်ဆက်တော့လဲ ကိုယ်ကလဲ စကားဝတ်ကျေရတာပေါ့…။ စကားပြောနေရင်း ကျနော့်အ၀တ်တစ်ချို့ ကို သူမက ယူပြီးခေါက်ပေးပါတယ်…
မလုပ်ပါနဲ့ ပြောလဲ မရပါဘူး….
“ ရပါတယ် ..အကိုရယ်…ပင်ပန်းမကြီးပါဘူး” လို့ ပြောသေးတယ်..။
သူ့ မှာ အဖေတွေ အကိုတွေ မရှိဘူးတဲ့ …သူ့ အကြောင်းတစ်ချို့ ပြောပြပါတယ်…
“ မဟုတ်တရုတ်ကိစ္စဆို ငါက သိက္ခာ အပွန်းမခံဘူး…မာနကြီးတယ်…ကျန်တဲ့ ကဏ္ဏဆိုရင်တော့ လူက လူဘဲ…”
ကျနော့်စိတ်ထဲမှာက ဒီမိန်းကလေးကို ကစားဝိုင်းကဘဲ ထင်နေခဲ့ တာကိုး…။
ဒီမိန်းကလေးလာတိုင်း ကျနော့် အကူကောင်လေးက ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့ ပါ..ဘာမှတော့ မပြောဘူး…။
သူလာရင် လ္ဘက်ရည်ဝယ်လာပေးတတ်ပါတယ်…တခါတခါ ဆေးလိပ်ဘူးဝယ်လာတတ်ပါတယ်….။
ဒီလိုနဲ့ ၂ပွဲ၃ပွဲ ဆက်တိုက်ကနေရင်း လာနေတော့ ခင်သွားမိပါတယ်…။ တညတော့ နှစ်ပါးသွားပြီးလို့ နားနေတုန်း သူမ
မစားချင်ဘူးပြောလဲ မရဘူး…အတင်းဘဲ။ နော်လုံးဝမစားဘူး…ကိုယ့်ဘာသာစားဆိုမှ…သူမဆီက စကားသံ ထွက်လာပါတယ်…
“ အကို ညီမကို ဘာလို့ ထင်သလဲ” တဲ့ ..ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်ပြောတာပေါ့…
“ မင်း…ကစားဝိုင်းက မဟုတ်လား” ဆိုတော့ သူမက ခေါင်းရမ်းပြီး ပြုံးနေပါတယ်…
“ ဒါဖြင့် ဘာလဲ…”
“ ညီမက ပြည့်တန်ဆာ တစ်ယောက်ပါ” တဲ့ …။
..ကျနော် အရမ်းအံ့သြသွားတာ..မင်းဘာဖြစ်လို့ ဒါတွေ လုပ်တာလဲလို့ ကျနော်ဆူတဲ့ အခါမှ…
အဆင်မပြေတဲ့ ဘ၀ရဲ့ အကျိုးပေးပေါ့လို့ သူမက လေသံအေးအေးနဲ့ ဘဲ ပြောပါတယ်…။
“ ညီမကို အရင်တွေ့ တဲ့ မင်းသားတစ်ချို့ က ညီမဘာလဲဆိုတာသိတယ်…သူတို့ လိုချင်တာကိုလဲ ယူတတ်ကြတယ်…
ဒါပေမယ့် အကို့ ဆီလာတော့ အခါတိုင်းဆက်ဆံသလိုမတွေ့ ရဘဲ..အကိုတစ်ယောက်လို ညီမတစ်ယောက်လိုဆက်ဆံတာတွေ့ ရတော့ ခင်မိတာပါ…ညီမ လုပ်စာကို ဘယ်မိဘမှ မကျွေးခဲ့ ရပါဘူး…အကိုတွေ မောင်တွေလဲ ကျွေးခဲ့ ရပါဘူး….ညီမဘ၀မှာ အမှတ်တရ ဖြစ်ချင်လို့ …အကို့ ကို ကျွေးတာပါ..အကိုမသတီဘူးဆိုရင်တောင်…ညီမလေးစိတ်ချမ်းသာအောင် နဲနဲလေးလောက်စားပြပါ…
ညီမ ကျေနပ်ပါတယ်…ဆေးလဲခတ်မထားပါဘူး…” ပြောရင်းနဲ့ သူ ငိုနေတယ်ဗျာ…။
ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ ပါဘူး….အခု ကျနော် စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဗျာ….။
သူဘ၀လေးကို သိကာမှ သူမကို သေချာပြန်ကြည့်မိတော့…။
ညိုရောင်ရောင် ဆံနွယ်စလေးတွေ……မှာလဲ အပြစ်ရှာလို့ မရ…
အားငယ်ရိပ် သန်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေ….မှာလဲ အပြစ်ရှာလို့ မရ….
နှာတံ စင်းစင်းလေးမှာလဲ အပြစ်မရှိ…တစ်ဆတ်ဆတ် တုန်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးမှာလဲ အပြစ်မရှိ…
ရုတ်တရက် ကျနော် ဆွဲကိုင်လိုက်သော သူ့ ရဲ့ အေးစက်စက် လက်ချောင်းလေးများမှာလဲ အပြစ်မရှိ…
သူမ တစ်ကိုယ်လုံး အပြစ်ဆိုတာ မရှိပါ….။
နောက်ဆုံး သူ့ မျက်နှာကို သေချာ စိုက်ကြည့်ရင်း…..“ သူသာ…ငါ့ညီမလေး ဆိုရင် ”ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ …..
“ ကဲ…ဒါဆို ပန်းကန်ထဲထည့် ဒို့ အတူတူ စားကြမယ်”
ကျနော့် စကားကို ကြားလို့ အံ့သြပြီးမော့ကြည့်နေတဲ့သူ့ မျက်နှာလေးကို ကျနော် ဘယ်လိုမှ မမေ့ နိုင်ခဲ့ ပါဘူး….။
ကျနော့်စိတ်ကို အာရုံ လွှဲပြီး…သူမ ကျေနပ်အောင်အတူစားခဲ့ ပါတယ်…။
ဒါကိုနောက်နေ့ဇာတ်ဆရာ ဘယ်လိုကြားလဲ မသိပါဘူး…ကျနော့်ကို ခေါ်ပြောတယ်..
“ ဒါလေးတွေကို…သိပ်အရောမ၀င်နဲ့ …မင်းသားအတွက်ပြောတာပါ…မင်းသားစာရိတ္တကိုတော့ ယုံပါတယ်”တဲ့ ..။
သြော်…လောကမှာ ကြည့်ပုံချင်း မတူနိုင်ကြပါလား….
သူတို့ တွေ ကျနော့်ကွယ်ရာမှာ…ကောင်မလေးကို ဘာသွားပြောလိုက်လဲ မသိပါဘူး…..
တစ်ညတော့ ကျနော့် တပည့်က တွေ့ လို့ အတင်းဆွဲခေါ်လာတယ်…ဒါတောင် သူမက အတင်းငြင်းနေတာပါ…
ကျနော့်ကိုတွေ့ တော့ သူ ကျိတ်ငိုနေတာ…မျက်နှာကလဲ ဖြူဖျောဖျောနဲ့ …ကျနော်မေးတော့…သူဖျားနေတာ…။
အနွေးထည်မပါ ဘာမပါနဲ့ …ရာသီကလဲ ဆောင်းရာသီ…။
သူ့ ကို ဆေးတိုက်ပြီး…ကျနော် အကြိုက်ဆုံး…ရှားနှစ်ရောင် ကုတ်အကျီ င်္လေး ပေးဝတ်တော့ သူမ မယူပါဘူး…အတင်းအော်မှ
ကြောက်ပြီး သူ ယူဝတ်တာပါ…။
ပြန်ပေးစရာ မလိုဘူး…ယူထား…လို့ ပြောတော့လဲ…ဘာမှ ပြန်မပြောပါဘူး….နောက်ကျနော့်အ၀တ်အစားတွေကို ယူခေါက်ပေးဘို့ လုပ်တော့ တားရတာပေါ့…။
“ သူ ကုတ်အကျီ င်္ လာမပေးတော့ဘူးထင်တယ်….”
“ ငါ့ မှာ အများကြီးပါ…ပေးနိုင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် မင်း လူတစ်ယောက်ကို အထင်မသေးနဲ့ ”
ကျနော့်စိတ်ကိုသိတော့ သူလဲ လန့် ပါတယ်….ထပ်မပြောရဲတော့ပါဘူး…။
ဇာတ်ပွဲ သတ်မှတ်ရက်ပြီးလို့ပွဲကူးကြတယ်…ဇာတ်ကားကြီး စမောင်းထွက်နေချိန်မှ…ဟို အဝေးကနေ သူမ ကုတ်အကျီ င်္ ရှားညိုရောင်လေး မြှောက်ပြီး ပြေးလိုက်လာပါတယ်….။
ကျနော်က သူမကို နောက်ဆုံးလက်ပြပြီး…ယူထားလိုက်ဘို့ လက်ဟန်ဘဲ ပြလိုက်ပါတယ်…ပြီးတော့ ကျနော့် တပည့်ကို မင်းမျက်လုံး မြင်ပြီလား…လို့ တော့ တစ်ခွန်း ဟောက်လိုက်မိပါသေးတယ်…။
သူမကို ကျနော် နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ မတွေ့ ရတော့ပါဘူး…..။
ဆောင်းညလေးတွေမှာ…ကျနော် ဦးထုပ်ခပ်ငိုက်ငိုက်ဆောင်းရင်း ကျနော့် ညီမလေးကို ကျနော် ရှာနေတတ်ခဲ့တယ်…။
ကျနော့်ညီမလေး လိုနေတာ အရေးပြားချမ်းတာလေးလောက်လုံတဲ့ အနွေးထည် မဟုတ်ပါဘူး…
ဘ၀လေးနွေးမယ့် နှလုံးသား နဲ့ ယက်လုပ်ထားတဲ့ အနွေးထည်လေးတစ်ထည်..
ကျနော့်ညီမလေးကို ကျနော် ပေးချင်ပေမယ့်….
ကျနော့် ညီမလေး ….ကျနော့် ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်.. အဝေးကဘဲ ချောင်းကြည့်နေမယ်ဆိုတာ တွေးမိတိုင်း…..။
ဆောင်းည ပွဲခင်းတွေမှာ ကျနော် တိတ်တိတ်လေး ငိုတတ်ခဲ့တယ်..။
သခင် ယေရှု ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေး ရှိတယ်လေ…..
“ ကိုယ်နှင့် သက်ဆိုင်သောသူကို ၊ကိုယ်နှင့်အမျှ ချစ်ပါ” တဲ့ …။
ဆြာခေါင်ရဲ့ ပို့စ်ကြောင့် diamonds in the eyes (မျက်ဝန်းထဲမှာမိုးရွာပြီ ညို..ဟိ) ဖြစ်သွားတယ်။
ဟုတ်တယ် လူတစ်ယောက် အပေါ်ကြည့်ပုံခြင်း ကွဲပြားကျတယ်။ “မရှိ ခိုးနိုး မလှ စုန်းရိုး” တဲ့ (စောရိုး ဟုတ်ဘူးနော်) စုန်းမျိုးလို့ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကိုယ်ကစကားမပီလို့နေမှာ။ မေမေ ဆီကကြားရတဲ့ စကား။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်ယောက် က ဒီလူ မကောင်းဘူး ဘာညာဆိုရင် လိုက်မုန်းကြတာပဲ။ ဒီလူက ဘယ်လိုတော်တာဘာညာဆိုလဲ ကိုးကွယ်လိုက်ကြတာပဲ။ ဒါနဲ့ အပေါ်ကပုံက ဒါ့ပုံလား ပန်းချီလားဟင်။ ဆြာခေါင်ရဲ့ ပန်းပုရုပ်လေးတွေပုံ မတင်တော့ဘူးလား။
စောရိုးပွကြီး မျက်မှန်ပျောက်နေသလားဟင်င်င်။” ကျော်” ဆိုတာပါလို့လား။ ကျော်ဆိုရင် ဘယာကြော်တောင် စိတ်မဝင်စားဘူး။ လက်ခ်ျမီး ကမှ ကြိုက်မှာ။
အမ်းးးးး ရယ်နေတယ်..ခုခွိ ခုခွိနဲ့ရင်ထဲရှိတယ်..နဲ့..ကြည့်လုပ်
ဟိုက စိတ်တိုပြီး လေယာဉ်နဲ့ဝင်တိုက်နေမှ…..။
စကားပုံက မရှိခိုးနိုး၊ မလှ စုန်းယိုး ပါ။။
မရှိဆင်းရဲသားများ ကိုယ်အိမ်နားလာရင် ခိုးများခိုးလေမလား လို့ခိုးနိုးနိုး ထင်တယ်..
မလှတဲ့ သူကို တော့ ရုပ်ဆိုးတော့ စုန်းမအထင်နဲ့ယိုးစွပ် တယ်.. အဲလိုပါ..
မလဲ့ စကားပီပါတယ်..။ ပန်းပုရုပ်လေးတွေ တင်မှာပါ..ဒီတစ်ခါ တင်ရင် လုပ်ပုံလုပ်နည်း စနစ်လေးတွေပါ တင်ဘို့စိတ်ကူးထားလို့ ပါ..။ နည်းနည်းတော့ အချိန်ပေးရမယ်..။ အပေါ်ကဟာ ဓါတ်ပုံပါ..။
လိမ်ပြောတတ်တဲ့ ဖဲဝိဇာ တွေများ … နောက်တခါ မလိမ်တော့ဘဲ မှတ်သွားအောင် ပါးကို ဂုန်နီအိတ်ချုပ်တဲ့ အပေါက် ၂ပေါက် ဖြစ်အောင် ထိုးပေးလိုက်တာတောင် အမှတ်မရှိဝူးတဲ့ခည …
အယ်..ဖါးရုပ်ဆိုးရဲ့ ကိုယ့်တွေဖြစ်ရပ်တွေလား။ ၀ဋ်ကြီးလိုက်တာနော် ငရဲမင်းကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့သလား။ အယ်လ်အေ လိုက်လယ်ဖို့ မဖိတ်ခဲ့ဘူးလား။ မီလီယံ ဘစ်စနက် နဲ့တေ့လွဲလွဲခဲ့ပြန်ပြီ။
စောရိုးအတွက် သင်းဘောဆောက်နေတယ် ပြီရင် ကက်ပတိန်ဦးဖောနဲ့ ချိဖ်မိတ် ကရင်စီ လက် အပ်ပြီး မသေမချင်း တိုက်ခိုင်းရမယ်။
အော်ရီဂျင်နယ်ဇာတ်သိမ်း နောက်ဆက်တွဲစကားလေးက ပိုလှသလားလို့…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောက်စ်တို့ရွာထဲ အကိုကြီးရှိနေတာ ဂုဏ်ယူပါ၏…
ကိုကျောက် နည်းနည်းလေး လိုတိုးပိုလျှော့ပေါ့..။
ညီမလေး ချမ်းနေရှာမှာပဲ ….ဆိုတဲ့ ဆြာခေါင်ရဲ့ စိတ်အရင်းခံကြောင့် တပိုင်းတစနွေးထွေးမှုကိုတော့ ညီမလေး ရသွားရှာမှာပါ။
ဆြာခေါင်ကွ…ယောက်ျားပီသ ပြတ်သားတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုပြသလိုက်နိုင်တယ်…ဂုဏ်ယူစရာကြီးဗျ..အဲ့မျိုးက …
​နောက်​ဆို .. ဆရာ​ခေါင်​ကို မင်းသားလုပ်​ခိုင်း​တော့မယ်​..
ဆရာ​ခေါင်​​ပြောတဲ့ မြင်​ကွင်းမျိုး​တွေ ကျ​နော်​လည်းကြုံခဲ့ရသားဗျ..
ငိုချင်​လျက်​ လက်​တို့ဖြစ်​သွားပြီ အစ်​ကိုကြီး​ရေ…
ကျနော်ကလည်း ကိုဆာ့ ဇာတ်လမ်း ညို့ ကို ဖတ်ပြီး လွမ်းနေတာ….။
ဇာတ်လမ်းရေးတာ ၀ါသနာပါတယ်ကြားတော့ ၀မ်းသာပါတယ်..
တွေ့ ကြုံရတဲ့ ဘ၀တွေက အများကြီး..။ဒါလေးရေးချင်လို့ကွယ်ဝှက်သောပုံရိပ်ကို တင်လိုက်တာပါ.. နောက်မဆို ဖတ်တဲ့ သူတွေ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ..။
ဟောာာာ ကိုမိုက် ..
ဟိုမှာ ကိုမိုက်ကို အားနာလို့အားလုံးကို တောင်းပန်ထားတယ်နော်..
ကျနော် တစ်ကယ် မဖတ်မိလို့ ပါ..။
(ကိုယ်နှင့် သက်ဆိုင်သောသူကို ၊ကိုယ်နှင့်အမျှ ချစ်ပါ” တဲ့ …။)
ဦးက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုပေမယ့်…
အဲဒီ စကားလေးကို နှစ်သက်လေးစားတယ်…။
ဒါကြောင့်လည်း ညီမလေးလို ချစ်ခဲ့တာပါ.. ဦးခေါင်က မိသားစု မောင်နှမ မေတ္တာ ငတ်တယ်..ဗုံဗုံ ရဲ့ ..။
မြန်မာပြည်မယ် တစ်ချို့ တန်ဖိုးကြီး လယ်သာကုတ် ကြီး ကို ဝတ်ပြီး ကြွားချင်လို့ ချွေး တစ်လုံးလုံး နဲ့ ဝဋ်ခံပြီး ဝတ်ကြရတာ တွေ့ဖူးသေး တော့ ပန်းချီဆရာ ဇာတ်မင်းသား ရေ။
အလွမ်းစာ တွေမှာ ဝင်နှောက်နေတာ စိတ်မရှိပါနဲ့။
ခေါင်းရှင်းချင်လို့ ဟာသ လုပ်နေရတာပါ။
စိတ်ဆိုးစရာလား… ခင်မင်လို့ပြောကြတာကို..။
လူတွေကို မြင်တဲ့အမြင် ကွာသွားတယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း
ဆိုင်တာပေါ့…ညီလေး ထင်မြင်ယူဆချက်လည်း မှန်တာပါဘဲ…။
ဆြာခေါင်ရေမျောသွားတာပဲ။ ရေးတတ်လိုက်တာ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး။ ရွေးချယ်စရာများများမရှိတဲ့ဘ၀တွေအတွက် ဘယ်သူ့ကိုအပစ်တင်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘာဘူးရှင်
မျှဝေခံစား မျောပေးတဲ့ နှလုံးသားနဲ့ စိတ်ထားလေးကို ကျေးဇူးပါ.
အနီးကပ်နေကြည့်မှ အနှိမ်ခံ ဘ၀လေးတွေ ရဲ့ အတိမ်အနက်ကို ပိုသိတာ…။
မရှိ ဝယ်ပေါ့ဟ ဟီဟိ
ကမ္ဘာကြီးရဲ့တနေရာမှာ…
နှလုံးသားဗဟိုပြုလို့ …အချစ်တွေ ယိမ်းတဲ့အခါ
အရောင်ရဲ့ လှည့်ကွက်နဲ့ …ပ ထုတ်တတ်တယ်..။
နှလုံးသားဟာ မြစိမ်း ကဗ္ဗလာပေါ့ ချစ်သူ..။
မြက်ပင်လေးတွေ ချည်ငင်လို့ 
ကိုယ်တောင့်တ တဲ့ 
နှလုံးသား အနွေးထည်…။ ။
ဒီ လို လိုတယ်ဆိုတာ သိဘို့ကလဲ မြင်တတ် ခံစားတတ် ကိုယ်ချင်းစာတတ်မှ ဆရာခေါင် ရဲ့
ဒါမှ မန်းဂဇက်ရွာ သူား ( တွေ ) ကွ။
နောက်တခါတွေ့ဆုံပွဲ အတွက် သဂျီးတောင် အနွေးထည်တွေ ၀ယ်နေလောက်ပြီ။
တန်ဘိုးဆိုတာ သတ်မှတ်သူရဲ့ ရင်မှာ သာ တည်ပါတယ် တဲ့။
လိုနေတာတွေ ဖြည့်ပေးနိုင်ဘို့ ကြိုးစားကြတာပေါ့ဗျာ။